Nezve - Shenzhen TronHoo Akangwara Technology Co, Ltd.
3D Printer Mafirimu
Mushure mekutengesa Sisitimu
TronHoo 3D - Yekuvandudza Mutungamiriri we3D Kudhinda Tekinoroji
TronHoo inyanzvi inotarisa kune 3D maprinta uye 3D kudhinda mafirita. TronHoo's 3D zvigadzirwa zvave zvichishandiswa zvakanyanya muchigadzirwa R&D, chakuvhuvhu kugadzira, indasitiri yezvokurapa, indasitiri yekuvaka, zvishongedzo uye mimwe minda. Tiri kutsvaga mhinduro ye 3D yakanakira iwe, kuunza tekinoroji ye3D muhupenyu hwako.
Mabhizimusi makuru eTronHoo anosanganisira 3D maprinta uye 3D yekudhinda zvinhu R & D, kugadzira, kutengesa uye mushure-kutengesa masevhisi, 3D yekudhinda tekinoroji mhinduro, 3D yekudhinda dzidzo uye 3D kudhinda masevhisi, nezvimwe.
Nei Uchisarudza TronHoo?
TronHoo inotungamirwa muShenzhen yeChina. Parizvino, yakaunganidza ruzivo rwakawanda mu 3D modelling uye 3D kudhinda slicing software, STEAM chirongwa chedzidzo chinobatanidza 3D digitaalinen tekinoroji, nezvimwewo, uye TronHoo ine akati wandei tekinoroji patent.
Nzvimbo yekugadzira yeTronHoo iri muJiangxi yekuChina. Iyo ine 15,000 mativi emamita akaenzana fekitori, gumi emhando yepamusoro yakazara otomatiki 3D filaments yekugadzira mitsara, maviri ehunyanzvi kuyedza mumarabhoritari ezvigadzirwa zve3D.
Uye timu yekugadzira ine hunyanzvi hwehunyanzvi. Yegore rekugadzira inokwana ye 3D maprinta anosvika mazana maviri emazana, uye epagore yekugona kugona kwe3D yekudhinda filamendi inosvika 1,500 matani.
TronHoo iri kuyedza kuunza 3D yekudhinda tekinoroji muhupenyu hwako, uye kuve mutungamiriri wehunyanzvi hwe 3D kudhinda tekinoroji!
Kubatana uye Kubatana
Kutarisa pane tekinoroji
Kutsvaga chokwadi uye kuva pragmatic
Uya ne 3D kudhinda
Akangwara kugadzira centre
10 yemhando yepamusoro yakazara otomatiki 3D filaments yekugadzira mitsara 2 nyanzvi yekuyedza ma laboratori
yezvigadzirwa zve 3D Iyo yegore kugadzirwa kugona kwe 3D maprinta anosvika 200,000 mauniti egore
kugadzirwa kugona kwe 3D kudhinda filamendi inosvika 1,500t.
TronHoo inowedzera mashandiro evaprinta ve3D uye zvinhu
Kunda mukurumbira wepamusoro mupasirese yepasirese 3D uye nharaunda yekugadzira zvinhu.
TronHoo akangwara kugadzira nzvimbo yakagara muJiangxi
Nzvimbo yekugadzira yeTronHoo iri muJiangxi yekuChina. Iyo ine 15,000 mativi emamita akaenzana fekitori Iyo yekugadzira chikero uye simba zvinonakidza kwazvo.
Kutamisirwa kweTronHoo dzimbahwe
Chigadzirwa R&D simba rehunyanzvi, kudhinda kwe3D kuri kusangana mumunda kuri kuramba kuchikura.
TronHoo iri kuuya pamberi
Inovandudza matekinoroji anowanzo kuve akasimba zvakanyanya uye anoputika. Iyi purojekiti yakafumurwa pane yega kuratidzwa uye yakakwezva kutariswa.
TronHoo yakatanga ngarava
Simba rinobuda mumunda wekuwedzera wekugadzira harimisike!